DAAWO: Emre Can Oo Soo Xushay Shaxdiisa Ugu Fiican Kubbada Cagta & Xidigaha Ku Soo Baxay-Miyaad Soo Xulan Kartaa Shax Iska Celin Karta Kooxdiisa? – WWW.Gool24.net
DAAWO: Emre Can Oo Soo Xushay Shaxdiisa Ugu Fiican Kubbada Cagta & Xidigaha Ku Soo Baxay-Miyaad Soo Xulan Kartaa Shax Iska Celin Karta Kooxdiisa?
Xidiga xulka qaranka Germany iyo kooxda Liverpool ee Emre Can ayaa soo xushay shaxdiisa ugu fiican ee kubbada cagta wuxuuna soo doortay koox ay adag tahay in laga guulaystaa. Emre Can ayaa hab muuqaal ah ku soo xushay shaxda kooxdiisa ugu fiican isaga oo waliba ciyaartoy kasta oo uu shaxdiisa ku soo daray sababta uu ku soo doortay sheegay.
Ciyaartoyda uu Emre Can soo xushay waxay iskugu jiraan kuwo uu ka soo garab ciyaaray iyo kuwo uu garoonka kaga hor yimid wuxuuna mid kasta ku doortay awooda uu garoonka ku dhex leeyahay maadaama oo uu leeyahay khibradii uu kula ciyaaray ama uu kaga horyimid.
Marka aad shax soo xulanayso ma aha wax sahlan waxaana jira ciyaartoy hadda kubbada cagta ku dhex jira oo heer sarre ah iyo kuwo hore u soo ciyaaray oo ay adag tahay in aad ka tagto waxaana shax kasta looga baahdaa 11 ciyaartoy taas oo ah tiro aad uga yar xidigaha aad soo xulan kari lahayd, waxayna taasi keenaysaa in aad magacyo badan oo aad jeclaan lahayd ka tagto.
Haddaba iyada oo muuqaalka iyo sharaxaad uu Emre Can bixiyay aad dhamaadka qormadan ka daawan karto waxaanu idiin soo gudbinaynaa xidigaha uu shaxdiisa so doortay. Ugu horayn Emre Can ayaa shaxdiisa kaga bilaabay goolhayaha wuxuuna soo xushay Manuel Neuer oo uu ku tilmaamay goolhayaha aduunka ugu fiican isla markaana ay xulka qaranka Germany ka soo wada ciyaareen.
Emre Can ayaa difaaca midig u doortay halyaygii xulka qaranka Germany iyo kooxda Bayern Munich ee Philip Lahm kaas oo ciyaaraha kubbada cagta ka fadhiistay dhamaadkii xili ciyaareedkii hore isaga oo aan abid kaadhka cas loo taagin inkasta oo uu waqti dheer ka soo ciyaarayay heerka ugu sareeya.
Difaaca dhexe ayuu Emre Can u soo wada xushay Sergio Ramos oo Real Madrid ka tirsan iyo difaaca dhexe ee kooxda Bayern Munich ee Boateng halka uu difaaca bidix u soo doortay David Alaba oo uu ku tilmaamay saaxiibkii ahna xidig heer caalami ah. Alaba ayaa lagu tilmaamaa xidigaha difaaca bidix ee aduunka ugu fiican isla markaana boosas badan ka ciyaari kara.
Afarta khadka dhexe waxa uu Emre Can u soo xushay Franck Ribery, Philippe Coutinho, Steven Gerrard iyo waliba Arjen Robben wuxuuna mid kasta ku amaanay awooda ciyaareed ee uu garoonka ku dhex leeyahay iyo sida ay u adag tahay in garoon lagaga hor yimaado.
Ugu danbayn Emre Can ayaa shaxda kooxdiisa waxa uu safka weerarka ku mideeyay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo uu si wayn ugu amaanay goolasha ay sanad kasta dhaliyaan. Haddii uu maanta tababare kubbada cagta ahi isla heli lahaa shaxda uu Emre Can soo xushay waxay u muuqataa mid ay adag tahay in la joojin karaa.
Haddaba akhriste adiga oo aan Emre Can shaxdiisa hal ciyaartoy ka soo dooran, ma soo xulan kartaa shaxda kooxda awooda u yeelan lahayd in ay garaacdo shaxda kooxda uu Emre Can soo xushay? Haddaba halkan ka daawo muuqaalka iyo qaabkii uu Emre Can shaxdiisa u soo xushay iyo sharaxaadii uu mid kastaba ka bixiyay.